hoy ny avy eo anivon’ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra, sampana Antananarivo. Tsy mbola miala amin’ny fisokafana ho amin’ny adihevitra ny Seces, hoy ny filohan’ny Seces Tana, ny Pr Sammy Grégoire Ravelonirina. Mbola lavitry ny afo ny kitay ary mbola be dia be ny vokatra andrasana amin’ny fanjakana raha ny mikasika ny vahaolana amin’ireo olana misy no resahana. Tsy marina ny filazana fa efa mivaha ny teboka miisa 6 amin’ny 7, raha ny voalaza tamin’ny filankevitry ny fivoriamben’ny Seces omaly ary nohamafisin’ity filoha ity izany. Vahaolana maharitra fa tsy petatoko no andrasana. Ny 15 janoary izao no fotoana nifanomezana tamin’ny mpitondra ivoahan’ny vahaolana, hoy izy, ka eo am-piandrasana izany dia mitohy aloha ny tolona. Hiverina hihidy ny “Barrière” anio, hoy ny filohan’ny Seces, satria marihina fa ato amin’ny tokotanin’ny oniversite izahay no manao fihetsiketsehana fa tsy any ivelany. Hisorohana amin’ny mety ho fidiran’ny mpanakorontana ihany koa no antony nandraisana ny fepetra. Raha ny fantatra moa dia mbola tsy vita hatramin’ny farany ny taom-pianarana 2018 – 2019 ho an’ny oniversiten’ Antananarivo.